နေ့လည်စာ (Staff Day) ~ စန္ဒကူး
ဒီနေ့ - မှို
Favorite Blogger & Links - WHY?
နေ့လည်စာ (Staff Day)
ထူးဆန်းအံ့သြဖွယ် (၇) ခု
၀ါးတီး နှင့် တောက်တောက်တောက်
Nivea Products နှင့် ကျွန်မ
Please don’t fall to pieces for yourself
ရုံးက တစ်နှစ်ကို staff day အတွက် အယောက်စီတိုင်း တစ်နေရာသွားအစာစား၊ ဒါမှမဟုတ် အဖွဲလိုက်သွား၊ concert တွေကြည့်ချင်ကြည့်၊ amusement parkကို သွားချင်သွားလို့ရတဲ့ budget ရှိတယ်။ မနှစ်ကတော့ ကျွန်မရုံးကသူငယ်ချင်းတွေက Under water world နဲ့ snow white concert သွားကြည့်ကြပေမယ့် ကျွန်မက မြန်မာပြည်ပြန်နေတော့ အဲဒီ ပိုက်ဆံမသုံးရသေးဘူး။ ထုတ်ပေးမလားဆိုတော့လဲမပေးဘူး..တစ်ခုခုသွားစား၊ သွားလည်မှပေးမယ်တဲ့...ကောင်းရော..
ဒါနဲ့ ကျွန်မ ရယ် ကျွန်မဘော့စ် ထဲကတစ်ယောက်ရယ်.. က အဲဒီပိုက်ဆံကိုမသုံရသေးတော့ဒီနေ့ နေ့လည်စာကို ဆိုင်တစ်ခုမှာသွားစားကြမယ်ဆိုပြီး စီစဉ်ထားလိုက်တယ်။ ခက်တာက ကျွန်မတို့ကိုပေးတဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ ဆို နှစ်ယောက်တည်းစားလို့မကုန်ဘူး. ဆိုတော့ ကျွန်မတို့က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်စီထပ်ခေါ်လိုက်တော့ စုစုပေါင်းလေးယောက်ဖြစ်သွားတာပေါ့။ အဲဒီ ကျွန်မဆရာက Associate Treasurer ဆိုပါတော့။ သဘောလဲအရမ်းကောင်းပါတယ်။ ကျွန်မတို့သွားစားမယ့်ဆိုင်က Balinsasayaw တဲ့.. (ဘလင်ဆာဆာရော) ရုံးနဲ့သိပ်မဝေးဘူး။ ပြီးတော့ သူက တစ်ဝိုင်းကို ၀ါးအိမ်လေးတစ်လုံးစီ တစ်လုံးစီနဲ့ လုပ်ထားတာ... အစားကိုတော့ ကြိုမှာထားလိုက်တယ်။ မပါမဖြစ် အချဉ်ဟင်းရေ ကတော့ အားလုံးအကြိုက် ပေါ့ (ရိုးရာအချဉ်ဟင်း ရည်ချက်နည်းကျွန်မ စားချင်စဖွယ်ပြင်ဆင်ကွယ်မှာရေးထားတယ်)။ ပြီး တော့ သီးစုံရွက်ကြော်နဲ့ ကြက်တောင်ပံချဉ်စပ်... Spicy chicken wings ...
ဆိုင်ရောက်ပြီးသိပ်မကြာပါဘူးအစားအသောက်တွေလာချတယ်.... ရိုးရာအချဉ်ဟင်းအရည်ကို ငါးနဲ့ချက်တာ၊ ငါးတောင်မှ အရမ်းဈေးကြီးတဲ့ငါးမှ အရသာရှိတာ..ဒီကလူတွေကတော့ အဲဒီဟင်းရည်ကမပါမဖြစ်ကိုဖြစ်နေတာ.. ဘာငါးနဲ့ဟင်းရည်ယူမလဲဆိုတော့ ငါးနာမည်တွေဖတ်တော့ရီချင်တယ် (လာပူလာပူ၊ မာရာမာရာ၊ ဘားငု၊ တစ်ငီးငီး) တဲ့... အားလုံးက ငါးအကြီးတွေ အကြည်းခွံလဲပါပါတယ်... တစ်ခုရှိတာ ဘားငု ငါးနဲ့ချက်တဲ့အချဉ်ရေ ကတော့အကောင်းဆုံးဘဲ လို့ဆိုတာဘဲ.. ဒါပေမယ့် ဘားငု ငါးနဲ့ချက်တဲ့ဟင်းရည်မရှိလို့ လာပူလာပူ ငါး နဲ့ချက်တာကိုဘဲရွေးရတယ်.. ကျွန်မကတော့ ကိစ္စမရှိ..ဘာငါးဖြစ်ဖြစ် ချဉ်ရင်ပြီးတော့..ပုံထဲမှာတော့ ငါးမမြင်ရဘူး..ဘာလို့လဲဆိုတော့ ငါးက ပုန်းနေတာ အရွက်တွေအောက်မှာ...ဒါပေမယ့်ခေါ်လာတဲ့သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကတော့ အရသာမရှိလို့ပွစိပွစိပြောနေလေရဲ့...
အင်းပြောပေါ့.. လာပြီး spicy chicken wings.. ကျွန်မနဲနဲမြည်းကြည့်လိုက်တယ်... စပ်တယ်..ဒါပေမယ့် ချိုတာလဲစိတ်ပျက်ဖို့ကောင်တယ်.. ကျွန်မပြောတယ်မကြိုက်ဘူးလို့....
ဟင်းထဲကိုအချိုထည့်ချက်တာလောက်မုန်းတာမရှိဘူး...ဒါနဲ့ ကျွန်မကတော့ အချဉ်ရေနဲ့ ဟင်းသီးရွက်ကြော် ဘဲစားလိုက်တယ်။ အဲဒါက မုန်လာဥနီ၊ ပဲသီး၊ ရွှေပဲသီး၊ မုန်လာထုပ်၊ ငရုတ်ပွ၊ သင်္ဘောသီးစိမ်း၊ ကြက်သား၊ ပန်းဂေါ်ဖီ တို့ကို ကော်ရည်နဲ့ကြော်ထားတာ... chopsoy လို့ခေါ်တယ်။
Posted by စန္ဒကူး at 2:06 AM